Shiinaha Drop - qaab dhalada hufan warshad dhalada khamriga iyo saarayaasha | Muraayadda Honghui
Af yar oo hadhuudh toosan ubax
200 ml dhalooyinka udugga
Crystal diamond galaas shumaca daahfuran
1000ml dhalada soodhada aan lahayn
500 ~ 1000ml dhalo saliid saytuun ah oo cagaaran oo madow oo cagaaran
Dhalo-qaabeeya dhalo khamri cas oo hufan
Ku raaxee Qamrigaaga Qanac buuxa: Muraayadahaani kuma jiraan kiimikooyin waxyeello leh sida BPA, phthalate, PVC, ama polycarbonate, sidaa darteed waxba kuma dhex shubi karaan cabitaankaaga dhalada. Ka samaysan muraayad awood u siinaysa midabka cabitaanku inuu iftiimiyo. Muuqaal xarrago leh oo lagu daro miisaska miisaanka leh naqshaddooda casriga ah. Kordhi khibradda cabbitaanka guud waxaana si adag kugula taliyay khubarada caafimaadka.
Waxa loo qaabeeyey si kaamil ah: muraayadahaani waxay u qaabeysan yihiin kaamil ah qaabeyn horumar leh iyo qiimo sumadeed oo aan la mid ahayn. Qaabka muraayadda qaaska ah wuxuu xoojiyaa cabitaanka aromas-ka iyo dhadhanka. Waxay leedahay muuqaal xarrago leh oo ku jira kabadhada khamriga waxayna ku dareysaa miisaska miiska mid kasta qaabkeeda casriga.
Saldhigga muraayadda ayaa bixisa xasilloonida ugu badan. Ku habboon dhammaan cabitaannada sidoo kale. Qaab dhismeedka horusocodka iyo qiimaha sumcadda aan u dhigmin. Qaabka muraayadda qaaska ah wuxuu wanaajiyaa carafka iyo udgoonka. Wuxuu ilaaliyaa una soo bandhigayaa dhadhan sida loogu talagalay. Ka samaysan muraayad saafi ah oo awood u siinaysa midabka khamriga inuu iftiimiyo. Muuqaal xarrago leh oo ku jira kabadhada khamriga oo lagu daro miisaska miisaanka miisaanka leh qaabkooda casriga ah. Kordhi khibradda cabbitaanka guud waxaana si xoog leh kugula taliyay khubarada adduunka oo dhan.
Hore: Dhalada khamriga ee Prismatic
Xiga: Dhalada khamriga ee casaanka ah
Dhalooyinka Khamriga Qurxinta
Dhalooyinka Khamriga Faaruq ah
Dhalooyinka Khamriga Yar
50ml dhalada cabitaanka caagga ah
50ml Square caag daboolan caano barafoobay waxay noqon kartaa b ...
100ml Kariimka u kala qaad dhalooyinka
500ml dhalada khamriga cagaaran ee madow
500ml dhalada khamriga ee qabow ee cagaaran
10-15ml Kariimka u kala qaad dhalooyinka